အင်တာနက်နှုန်းထားများကိုအိမ်မှာရှာဖွေနေပါသလား။ ဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်သင်၏နှုန်းထားအပေါ် Save | Gadget သတင်း
မကြာသေးမီကအင်တာနက်ငှားရမ်းရာတွင်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည်။ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအပူတပြင်းဖြစ်စေသော ADSL ဆက်သွယ်မှုများသည် ကံကောင်းထောက်မစွာပင်အင်တာနက်ကွန်ရက်များတိုးတက်လာခဲ့ပြီး 1Gb အထိအမြန်နှုန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလျှင်ရွေးချယ်စရာများများများများရလေ ပို၍ ရှုပ်ထွေးလေကကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သောရွေးချယ်မှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်၌ရှာဖွေခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအင်တာနက်နှုန်းများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မည်။
အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းချက်: အိမ်တွင်း Fiber 100Mb လိမ္မော်ရောင်
စျေးအသက်သာဆုံးခ: သာ finetwork ဖိုင်ဘာ
အပြည့်စုံဆုံးနှုန်း: 100Mb Fiber ပိုမိုဘိုင်း
အကောင်းဆုံးအင်တာနက်နှုန်း: Yoigo ၏ 100Mb Fiber
အိမ်တွင်အင်တာနက်လိုင်းမပါဘဲ၊ အိမ်ငှားရန်မလိုဘဲ၊ ငှားရမ်းခ၊ အမြဲတမ်းမရှိဘဲအင်တာနက်ငှားရမ်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိသည့်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရှိလာပြီဖြစ်ရာထိုကိစ္စကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးအော်ပရေတာများမှပေးသောနှုန်းတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်ဆန်းစစ်ရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
Movistar သည် 300Mb Movistar ကိုဆက်သွယ်သည် 300Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
လူပျို Lowi ဖိုင်ဘာ 100Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
Vodafone Fiber 300Mb 300Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
အိမ်တွင်း Fiber 100Mb လိမ္မော်ရောင် 100Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
MásMóvilမှ 100Mb Fiber 100Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
Yoigo ၏ 100Mb Fiber 100Mbps ယူရို ၃.၁၁ / လ
Jazztel ခေါ်ဆိုမှုဖြင့် 100Mb ဖိုင်ဘာ 100Mbps € / လ
1 Lowi, ဒီ Vodafone OMV အတွက် option ကို
3 Orange Home Fibra နှုန်းထားများ
4 Jazztel နှင့်၎င်း၏ဖိုင်ဘာနှုန်းသစ်များ
5 Vodafone နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် 300 Mb
6 Yoigo ဖြင့်သာ 100Mb အချိုးကျသောဖိုင်ဘာ
Lowi, ဒီ Vodafone OMV အတွက် option ကို
မကြာသေးမီအချိန်အထိ Lowi သည်ကောင်းမွန်သောလွှမ်းခြုံမှုဖြင့်စျေးပေါသောအင်တာနက်ကိုငှားလိုပါကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Vodafone ကွန်ယက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အလွန်လျှို့ဝှက်နေရာတွင်နေထိုင်သည်မဟုတ်လျှင်သင်သည်ပြproblemနာမရှိဘဲဖိုင်ဘာလွှမ်းခြုံမှုမှအကျိုးရရှိနိုင်သည်။ စျေးနှုန်းသည်တစ်လလျှင် ၂၆ ယူရိုသာရှိပြီးစျေးကွက်တွင်အနိမ့်ဆုံးဖိုင်ဘာနှုန်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ စျေးနှုန်းကအားသာချက်ရှိပုံမပေါ်လျှင် ထပ်မံ၍ ရှိနေသေးသည်။ ဒီနှုန်းထားကအမြဲတမ်းမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒဏ်ကြေးဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ငွေကိုကြောက်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးလဲနိုင်၊ ပြောင်းနိုင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကတပ်ဆင်ဖို့ဒါမှမဟုတ် router ရဲ့ငှားရမ်းခအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအားသွင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ Lowi ၏ဖိုင်ဘာနှုန်းကိုအသေးစိတ်ဖတ်ပြီးနောက်သင်အိမ်၌သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ရန်မစောင့်နိုင်လျှင်၊ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုချုပ်ဆိုရန်ဤ link ကိုဆက်သွယ်ပါ.
အဝါရောင်အော်ပရေတာသည်စျေးကွက်ကိုပြောင်းလဲရန်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ အခုအချိန်မှာတော့သူကဖိုင်ဘာနဲ့ ADSL ကမ်းလှမ်းမှုတွေဟာဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာရောက်နေပုံရပါတယ်။ တစ်လလျှင်ယူရို ၃၂.၉၉ သာလျှင် 29,99Mb ဖိုင်ဘာနှင့်ကြိုးမဲ့ဖုန်းဖြင့်အကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်။
ဒီစျေးပေါတဲ့လစဉ်ကြေးမှာတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် router အသစ်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအသစ်မှာအခမဲ့ဖြစ်လို့ဘာမှထပ်ဖြည့်စရာမလိုပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းတွင် ၁၂ လကြာတည်မြဲမှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိရလျှင်ဤကာလ၏အဆုံးမတိုင်မီနှုန်းကိုပြောင်းလဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဒဏ်ကြေးကိုပေးရလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဖို့ဒီ link ကိုထားခဲ့ပါ.
Orange Home Fibra နှုန်းထားများ
Orange catalog မှတစ်ဆင့် Home Fibra နှုန်းထားများသည်အိမ်တွင်အင်တာနက်ငှားရမ်းရန်နှင့်အခြားဘာမျှမရှိခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤနှုန်းထားများသည်အိမ်တွင်းဆက်သွယ်မှုကိုအိမ်တွင်မထားရှိရန်နှင့်စျေးပေါသောကြိုးလိုင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့အကန့်အသတ်မရှိဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများနှင့်မိနစ် ၁၀၀၀ ပါဝင်သည်။ အဘယ်စျေးနှုန်းဖြင့်နည်း။ ကောင်းပြီ€ 1000 တစ်လအရာအားလုံးအဘို့။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Orange လွှမ်းခြုံမှုရှိတဲ့ fiber ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုမစဉ်းစားသင့်ဘူး။ ဒီနှုန်းထားကိုဒီကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်စာချုပ်ချုပ်ပါ.
၎င်း၏ပုံရိပ်ကိုဆေးကြောပြီးသည့်နောက် Jazztel သည်ကျုံ့နိုင်သည့်ဖိုင်ဘာနှုန်းထားများကိုပြောင်းလဲရန်အဆိုပြုထားသည်။ ထို့ထက်ပိုသည်မှာလိမ္မော်ရောင်နှုန်းထားများကကျွန်ုပ်တို့ကိုမအောင်မြင်လျှင်၊ သူတို့သည်တူညီသောလွှမ်းခြုံကွန်ယက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အင်တာနက်ပေါ်မှနှုန်းထားကိုသာအကြံပြုလိုပါက။ Jazztel သည် ၁၀၀ မီလီမီတာအချိုးကျသောဖိုင်ဘာမြန်နှုန်းနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှုန်းကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားကိုတိုးမြှင့်မည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲလိုင်းဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၎င်းမှာအချိန်မရွေးအကန့်အသတ်မဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အော်ပရေတာဖြစ်သည်။
သင်၏လစဉ်ကြေးမှာတစ်လလျှင် ၂၈.၉၅ ယူရိုဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းနေသည်။ အိမ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားနေပါကသတိရရမည့်အရာ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကတောင်းဆိုရန်သို့မဟုတ်၎င်း၏နှုန်းထားများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုစာချုပ်ချုပ်ရန်၊ သင်သည်ဤ link ကိုရယူရန် မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ.
Vodafone နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် 300 Mb
လွှမ်းခြုံမှုပြproblemsနာများကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အော်ပရေတာများနှင့်အင်တာနက်ကိုစာချုပ်ချုပ်လိုပါက Vodafone နှင့်၎င်း၏ ONO ဖိုင်ဘာကိုမေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာအမြန်နှုန်းများစွာရှိသော်လည်း၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကိုမသုံးရန်မကြိုးစားပါက၊ အကောင်းဆုံးနှုန်းမှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ Fiber Ono 300Mb.
အကောင်းဆုံးကတော့ဒီနှုန်းထားဟာ ၂၄ လအတွက်လစဉ်ကြေးပေးရပြီးယူရို ၃၉ ကိုသာပေးရမယ်၊ ယူရို ၂၀၀ ကျော်ကိုချွေတာမှာဖြစ်တယ်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်လွတ်မသွားစေရန်သင်လုပ်ရမှာက အခုဒီဌားရမ်းကိုငှားရန်ဒီ link ကိုသုံးပါ.
Yoigo ဖြင့်သာ 100Mb အချိုးကျသောဖိုင်ဘာ
Yoigo ကိုဖိုင်ဘာနှုန်းစျေးကွက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းကအလုပ်သမားငှားရမ်းချိန်တွင်စီးပွားရေးရွေးချယ်မှုများပြားလာသည်။ ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နှုန်းထားသုံးခု, ငါတို့ ကျနော်တို့ 300Mb နှင့်အတူအလယ်အလတ်တ ဦး တည်းအကြံပြုပါသည်အထူးသဖြင့်၎င်း၏စျေးနှုန်းနှင့်မြန်နှုန်းသည်။
ဒီနှုန်းထားကိုငါတို့သတိရရမယ် 12 လတစ်နေထိုင်ရှိပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မကိုက်ညီပါကပေးဆောင်ရန်အများဆုံးပြစ်ဒဏ်မှာယူရို ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ဒီသဘောတရားများအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုသင့်မှာကောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ဤနှုန်းထားကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, သင်ဤ link မှလျင်မြန်စွာအွန်လိုင်းငှားရမ်းနိုင်သည်.
သင်မြင်သည့်အတိုင်းအိမ်တွင်အင်တာနက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ယခုသင်စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးလက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများကိုသိပြီ အင်တာနက်နှုန်းထားများ သာအခက်ခဲဆုံးအကြွင်းအကျန်။ ဘယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုငှားရမယ် အကယ်၍ သင်မသေချာပါက၊ Roams နှိုင်းယှဉ် သင်လိုချင်တာကိုရှာပါ။